वार्तामा आए विप्लव समूहलाई सरकारले स्वागत गर्छ: मन्त्री बाँस्कोटा - Nepal's Digital News Paper
काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचनाप्रविधी मन्त्री गोकुल बास्कोटाले प्रतिवन्धित विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आए वार्ताका लागि सरकार तयार हरेकाे बताए । बिहीवार मन्त्रालयमा गरेको नियमित पत्रकार सम्मेलनका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव समूहलाई वार्तामा आउन भनिरहेको बताउँदै जेलमा राखिएका मान्छे छोड्दै उनीहरुको शक्ति सञ्चयका लागि भने वार्ता नहुने प्रष्ट पारे ।
उनले भने, ‘वार्ताका लागि मान्छे छोड्नुपर्ने भन्ने हुँदैन । ५२ सालदेखि ६२ सालसम्म के भयो ? वार्ता गर्ने, छोड्ने फेरि शक्ति सञ्चय गर्ने ? फेरि त्यसकै दुस्चक्रमा फर्किने ? त्यसमा सरकार सचेत छ ।’सरकारले समातेको मान्छे बन्दुक बोक्नका लागि छाडेर वार्ता गर्ने कुरा नहुने मन्त्री बाँस्कोटाको भनाई छ ।